Galmudug oo fulinaysa amarkii RW Rooble kuna dhawaaqday in guddiga doorashadu shaqo gelayaan.
January 12, 2021 Xuseen 4
Puntlandtimes (Dhuusamareeb)-Madaxweyne ku-xigeenka ahna ku-simaha madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Mudane Cali Daahir Ciid ayaa kormeeray xarunta loo diyaariyay inay dagaan Gudiga doorashooyinka.
Xaruntani ayaa ah mid loo diyaariyay inay degaan gudiyada doorashooyinka heer qaran iyo dawlada gobaleed iyo guud ahaan hawl wadeenada doorashada, sida uu xaqiijiyey madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo caddeeyey inay doorashada bilaabayaan.
Madaxwayne kuxigeenka ayaa dhamaanba kor meeray xarunta waxa uuna warbixin ka dhagaystay masuuliyiinta gacanta ku haysa xaruntani oo la filayo inay dhawaan soo dagaan gudiga doorashooyinka, wuxuuna sheegay in dhawaan halkaasi lagu qaban doono doorashada Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka ee degaanada Galmudug.
Arrintaan ayaa ku soo beegmaysa xilli madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed uu maanta gaarey magaalada Baydhabo isagoo ku dhawaaqay inay doorashada bilaabayaan kadib markii dhowaan Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya sheegay inay doorashada bilaabayaan.
Guul iyo Gobonimo,waa in Doorashadu dhacdo,waayo waa arrin Dastuuri ah,islamarkaana muhiim u ah Dowlidnimada,iyo shacabka Soomaaliyeed.
Tanaasul wax kasta oo suurto gal ah waa sameeysey Madaxda Dowladda dhexe Soomaaliya,xattaa waxaay sameysey Tanaasul aan innaba suurto gal aheyn in Tanaasul laga sameeyo.
Waxaa iskacad, kuwa diidan iney Doorashadu dhacdo aheyn kuwa doonaya Doorasho 100%.
Sidaas awgeed waa in ay dhacdo Doorashadu, in ka badan 30 Sano bay dadka Soomaaliyeed ku soo jireen looma dhamma, iyo Cirka iyo Dhulka ayaa soo dumaya haddii la taabto Qufulka ku xiran Albaabkaas Reer Hebel baa iska leh,Hebel oo Reer Hebel ah baa iska leh waana lama taab taan, 30 Sano ka dib weli ma waxaan ku jireynaa,looma dhamma, Cirka iyo Dhulkaa soo dumaya!!
Taas waa in laga gudbaa waayo waa sababta ay Dowladnimo micna leh uga dhismi weydey Soomaaliya.
Yaan loo joojin dhaqsiyaad daneystayaal ah,una adeegaya Danaha Kenya iyo Emirates + kuwo kaleba.
Deni weli fecil celin kama samayn, go, aanka farmaajo qaatay kagana maarmay doorasho ka dhacda Puntland & Jubaland. Muxuu iga dhuuntay inuu jawaabtaa? kkk kkk kkk
Waar dee waa caynkaa!
Waa loo joojiyey oo loo joojiyey oo loo joojiyey ee iyagaa soo raaci waayey. Waa loo tanaasulay oo loo tanaasulay oo loo tanaasulay ee iyagaa la afgaran waayey. Marka ay halkaa botorinaydo in doorasho la aado maxaa diidaya?
Adxaabta sharafta leh, waxaad hilmaanteen hadalkii Boqor buraan oo ahaa doorashada waa lagalayaa labada ciyaal suuqaana waa laxukumayaa sidaas bay iskuraaceen dhamaan madaxdii iyo isimadii puqtland iyo juglan, reerka go,aan qaadashada waa lagu yiqiin markay xaaladu kuxumaato noolaada.kkkkkk